Sọpụrụ Ime Anwansi Huawei ga -enwe akụkụ akụkụ anọ | Androidsis
Huawei's Magic Honor nwere ike ịmegharị n'akụkụ niile
Huawei nwere ezigbo nchekwa na akara nsọpụrụ yana nke bụ eziokwu bụ na ọ na -arụ ọrụ nke ọma. Ọzọkwa ika a na -enye gị ohere jiri obere ihe nlele gbaa chaa chaa nke ahụ ga -ahụ ọkụ echi ụbọchị 16 na nke ahụ nwere ike tụọ aka na ihe dị nnọọ iche na ihe Samsung na -eme anyị na njedebe Galaxy S6 / S7, Xiaomi na Mi MIX ya na, na akụkụ, Usoro ihe nkiri Westworld.
Huawei's Honor Magic bụ ama nke anọwo na ntụpọ maka ụbọchị ole na ole ugbu a na ụlọ ọrụ mara ọkwa mmemme maka December 16. Site na onyonyo teaser nke ụlọ ọrụ ahụ kesara, Honor Magic dị ka ọ dịla njikere ịmalite n'oge ogbako mgbasa ozi, yabụ echi anyị nwere ike nwee nnukwu mmemme tupu ngwụcha afọ.
Sọpụrụ Ime Anwansi ga -abụ ekwentị 'echiche' na ihe ọ dị ka ọ na -abịa mpi ozugbo megide Mi MIX site na Xiaomi, opekata mpe na nha ihuenyo na ahụ.
Ugbu a, anyị nwere asịrị ọzọ na -egosi na ekwentị nwere ike iju anyị anya na ngwanrọ a na imewe ya, ebe enyo enyo ya nwere ike ịbụ. gbagọrọ agbagọ n'akụkụ anọ ya niile. Banyere ngwanrọ a, ọ ga -agụnye ụfọdụ atụmatụ ọhụụ na pụrụ iche na oyi akwa EMUI (Emotion UI) n'onwe ya.
Anyị nwekwara ohere iji akụkụ nke nkọwapụta gị yana a 5-anụ ọhịa QHD ihuenyo (2560 x 1440), 4 GB nke Ram, Kirin 950 64-bit octa-core chip, nhazi abụọ na igwefoto n'azụ 12MP, batrị 2.900 mAh na nyocha mkpịsị aka. Amaara na ọdụ ụgbọ elu ahụ ga -adị oke ọnụ, yabụ atụla anya ịchọta ya n'etiti oke ala na ọkara, kama na -achọ elu. Anyị nwere $ 1.442 dị ka ọnụ ahịa asịrị, mana ọ na -esiri anyị ike ịghọta ma ọ bụrụ n'ezie na ịchọrọ ịsọ mpi megide Mi MIX nke Xiaomi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei's Magic Honor nwere ike ịmegharị n'akụkụ niile
Samsung ga-etinye Samsung Pay na ọtụtụ ekwentị ya na 2017